China 2020 ကောင်းသောရောင်းအားအပူခံနိုင်ရည်ရှိဆီအုန်းမြှုပ်ပြွန်တရုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ insulation tape rectangular silicone tube ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်ရုံ | ဂျွမ်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အပူဒဏ်ခံနိုင်သည့် silicone အမြှုပ်ပြွန်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ insulation tape rectangular silicone tube ဖြစ်သည်
အနီ, အပြာ, အဖြူ, အနက်ရောင်, အဝါရောင်, ECT
အမြှုပ်ဆီလီကွန် strips တွေ
စံအရွယ်အစား / nonstandard
တံခါးများနှင့် ၀ င်းဒိုးများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊
22019 ရောင်းအားသည်အပူကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် silicone အမြှုပ်ပြွန်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ insulation tape rectangular silicone tube ဖြစ်သည်
မြှုပ်ဆီလီကွန် strips များ၏ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်
သင်သည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်သောအခါဆီလီကွန်ရာဘာထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့်အလီဘာဘာ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောအရည်အသွေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုယုံကြည်ပါ။ အကြမ်းခံနှင့် elastic ။ အလွန်မြင့်မားသောနှင့်အနိမ့်အပူချိန်နှစ်ခုလုံးကိုဆန့်ကျင်ကိုင်ထားသည်။ လျှပ်စစ်မီးမပေးပါဘူး ဤတွင် Jujie ၌ငါတို့စိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုတင်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO 9001: 2015 စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ဝယ်ယူမှုရွေးစရာများအပြင်လက္ကားဝယ်ယူမှုရွေးစရာများကိုလည်းပေးသည်။
အပူခံနိုင်ရည် silicone မြှုပ်ပြွန်
အပူချိန်အကွာအဝေး: -40 ℃ - 200 ℃
၎င်းသည်အထူးပြုပြင်ထားသော၊ အဆိပ်မရှိ၊ ကောင်းမွန်သောအပူခံနိုင်ခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အပူချိန် ၂၀၀ နှင့်မြင့်မားသောဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ကက်ဘိနက်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ကွန်တိန်နာ၊ ပက်ဖြန်း၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အလှဆင်ခြင်း၊ တံခါးနှင့် ၀ င်းဒိုး၊ စက်ယန္တရားများအတွက်သင့်တော်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများကိုပြွန်များထဲသို့ပြုပြင်ပြီးစံနှုန်းအရထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
သိပ်သည်းဆ ၀.၈ ခန့်၊ အမြန်ပြန်ခုန်။ အပူစီးကူးမှုနိမ့်သည်။
အရွယ်အစား၊ အထူ၊ အရောင်နှင့်မာကျောမှုစသည့်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမည့်နမူနာကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ - 1. အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အနိမ့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်။
4. နည်းပညာသည်ရင့်ကျက်။ တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးဖြစ်သည်။
5. Non- စံအစိတ်အပိုင်းများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
အမြှုပ်ဆီလီကွန်ရာဘာတံဆိပ်ခတ်အစင်း (mm) အမြှုပ်ဆီလီကွန်ရာဘာပြွန် (mm)
round bar စတုရန်းဘား Profiled ဘား အမိန့်ထုတ်လုပ်မှုအရသိရသည်။
φ2 8 × 8 P အမျိုးအစား
φ3 8 × 10 တြိဂံအမျိုးအစား
φ4 10 × 10 အထူးသတ်မှတ်ချက်များကိုအရောင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အွမ် ၇ 12 × 12
အွမ် ၈ 15 × 15
f ၏ပုံoam ဆီလီကွန် strips တွေ
အမြှုပ်ဆီလီကွန် strips တွေ၏ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်
ထုပ်ပိုး & ရေကြောင်း
Jiangyin Jujie ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအထူးကျွမ်းကျင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆီလီကွန် ထုတ်ကုန်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်၊ အလင်းရောင်၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးနှင့်စက်ယန္တရားစက်ရုံများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဆီလီကွန်ရေပိုက်များ၊
ရှေ့သို့ 2020 ပျော့ပျောင်းသောဆီလီကွန်ရော်ဘာပြွန်ခံနိုင်ရည်ရှိဆီလီကွန်အမြှုပ်ပြွန်အပူကျုံ့
လှပသောဆီလီကွန်အမြှုပ်ပြအချော ... \_ t
တရုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည် elastic smo ...
၂၀၂၀ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်သည့်ဆီလီကွန်ရေမြှုပ်အစ ...
ကြီးမားသောအချင်းကူးကူး silicone မြှုပ်ပြွန် SP ...
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အစာစားနိုင်သည့်ရာဘာလေပူရေပိုက် ... Reinfor ...